Japanese Hot Pot Restaurant @Ohsama 783 views
ဒီတစ်ခါမှာတော့ ဂျပန်ဟော့ပေါ့စစ်စစ်ကို သုံးဆောင်ချင်သူများအတွက် "Ohsama Japanese Hot-Pot Restaurant" ဆိုတဲ့ ဆိုင်ကောင်းလေးတစ်ဆိုင်နဲ့ မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ ဆိုင်တည်နေရာက ဖိုးစိန်လမ်းထဲမှာပါ။ ရန်ကုန်မြို့မှာရှိတဲ့ စားဖူးသမျှ ဟော့ပေါ့ဆိုင်တော်တော်များများနဲ့ အရသာတော်တော်လေးကွဲထွက်ပါတယ်။
ဟော့ပေါ့ဟင်းရည်ကို ကြက်ပြုတ်ရည်၊ ဝက်ပြုတ်ရည် စသည်ဖြင့် ပြုလုပ်ထားခြင်းမဟုတ်ဘဲ ပင်လည်အောက်မှရသော ရေညှိကိုအသုံးပြုပြီး ပြုလုပ်တဲ့အတွက် ကျန်းမာရေးနဲ့ အထူးညီညွတ်ပါတယ်။ ဟော့ပေါ့ဟင်းရည်ထုံးစံအတိုင်း အချိုနှင့်အစပ် (၂)မျိုးရှိပေမဲ့ အစပ်အရသာပြင်းထန်ခြင်းမျိုးမရှိဘဲ ခပ်ပေါ့ပေါ့သာ သုံးဆောင်ရမှာပါ။ အချဉ်စပ်တဲ့အခါမှာလည်း ငရုပ်ဆီကိုအသုံးမပြုဘဲ ဂျပန်ရိုးရာနည်းအတိုင်းစပ်ပေးပါတယ်။ ကျန်းမာရေးလိုက်စားသူများအတွက်တော့ အထူးကြိုက်နှစ်သက်မှာ သေချာပါတယ်။
ဟော့ပေါ့အပြင် အကင်ပါတွဲဖက်သုံးဆောင်နိုင်ပါသေးတယ်။ ဖေဖော်ဝါရီလမှာ အကင်အဝစား အစီအစဉ်ပြုလုပ်ခဲ့ပေမဲ့ Admin တော့မမှီလိုက်ပါဘူး။ Ohsama Japanese Hotpot ရဲ့ ထူးခြားချက်နောက် တစ်ခုမှာ အသားငါးများနှင့် အသီးအရွက်များက အမြဲတမ်းလတ်ဆတ်နေခြင်းပါ။ Admin ရောက်တဲ့ (၃)ခေါက်လုံးမှာ တစ်ခါမှအရသာအပြောင်းအလဲမရှိခဲ့သလို အမြဲလတ်ဆတ်နေတာ ပါပဲ။ ပြည်တွင်းမှ အသားများအပြင် ဂျပန်နိုင်ငံမှ တရားဝင်ကိုယ်စားလှယ်ယူကာ တင်သွင်းလာသော အမဲသားကိုလည်း သုံးဆောင်နိုင်ပါတယ်။
အရသာကောင်းမွန်ကာ ပိုမိုနူးညံ့မှုရှိတာကို တွေ့ရပါတယ်။ Admin ကတော့ အကင်စားဖြစ်တဲ့အခါ ဆိုင်ကိုပဲကင်ခိုင်းဖြစ်တာများပါတယ်။ အသားအားလုံးရဲ့ လတ်ဆတ်မှု၊ နူးညံ့မှုအပြင် Ohsama အချဉ်ဖြင့် တွဲဖက်သုံးဆောင်ရတဲ့အခါမှာ တမူထူးခြားတဲ့အရသာကို ပေးစွမ်းနိုင်ပါတယ်။ သေချာတာကတော့ အချိုမှုန့်အရသာမပါဝင်တဲ့ ဂျပန်ဟော့ပေါ့စစ်စစ်ကို သွားရောက်မြည်းစမ်းသင့်လှပါတယ်။ ယခုအချိန်ထိ အသားများကို ၂၀% ဈေးလျော့ထားတာဆိုတော့ မြည်းစမ်းကြည့်ဖို့ အချိန်ကောင်းမို့လို့ Myann ပရိသတ်ကြီးကို လက်တို့လိုက်ရပါတယ်။
Location – Ohsama Japanese Hot-pot Restaurant
No. 28/B, Pho Sein Road, Natmauk Quarter, Tamwe Township, Yangon.
Phone – 01555539, 0931382082, 0930224438
Phuu Phuu ( MyLann )